အကြွေးဝယ်ကတ် သုံးစွဲသူများ ကြွေးမြီများကို ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက် နောက်ဆုံးထား ပေးသွင်းရန်နှင့် ပ? - Yangon Media Group
ဧရာဝတီဘဏ်၏ အကြွေးဝယ်ကတ် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ကျန်ရှိသောကြွေးမြီများကို ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက် နောက်ဆုံးထားပေးသွင်းရန်နှင့် ပျက်ကွက်ပါက အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နှင့်တကွထပ်မံ ကြေညာ၍ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ဆာင်သွားမည်ဟု ဧရာဝတီဘဏ်မှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သတိပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီဘဏ်၏ အကြွေးဝယ်ကတ် အသုံးပြုသူများကို အများဆုံးရက်ပေါင်း ၅ဝ အတိုးမဲ့အသုံးပြုခွင့် ပေးထားပြီး အကြွေးဆပ်ရမည့် သတ်မှတ်ရက်တွင်အီးမေးလ် (သို့မဟုတ်)ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့အသိ ပေးအကြောင်းကြားမှုများဆောင်ရွက်ပေးသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆက်သွယ်မရသည့်အကြွေးဝယ်ကတ်အသုံးပြုသူများသိရှိစေရန် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် အသိပေးရခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဧရာဝတီဘဏ်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါ်သီရိကြာညိုက ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် ပြောသည်။ ”အီးမေးလ်တွေ၊ မက်ဆေ့ခ်ျ တွေပေးပို့ဆက်သွယ်ပေမယ့် ဆက်သွယ်မရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေ ကြေညာရင် သူတို့သိသွားစေချင်တာ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှတစ်ဆင့် ဧရာဝတီဘဏ်အြေ<ွကး ကတ်သုံးစွဲနေသူများသိရှိစေရန် ကြေညာထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အြေ<ွကးဝယ်ကတ်အတွက် ဧရာဝတီဘဏ်သို့ ငွေပြန်လည်ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်မှုများပေါ်ပေါက် နေသည့်အတွက်သက်ဆိုင်သူများထံဘဏ်မှအသိပေးစာများပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြွေးဝယ်ကတ်အသုံးပြုသူအနည်းငယ်သာရှိပြီး ယင်းကဲ့သို့ြေ<ွကးမြီပြဿနာများမဖြစ်ပေါ်စေရန် ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၏ရယူအသုံးပြုနိုင်မည့် သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပြဋ္ဌာန်းပေး ရန်လိုအပ်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာစိုးထွန်းကသုံးသပ်သည်။
”အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာက အကြွေးဝယ်ကတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ထိန်းချုပ်တဲ့အဖွဲ့ကသီးသန့်ရှိတယ်။ နောက်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်း၊ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။ ဒီမှာကငွေချေးရခက်တယ်လို့အော်နေကြတယ်။ ဒီလူကစိတ်ချရတယ်စိတ်မချရဘူးဆိုတာမသိရဘူး။ အဓိကပြဿနာက လူတစ် ဦးကိုဘယ်လောက်ချေးရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူး”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ချေးငွေရယူပြီးပြန်ဆပ်သူများစာရင်းနှင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းမရှိသူများစာရင်းကိုပြုစုနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်နေပြီဖြစ်သည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါက်တာ ဇေယျာညွန့်က”အကြွေးဝယ်ကတ်ကို အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းမှာသုံးစွဲလို့ရသလို ပြန်ဆပ်ရမယ့်ရက်မှာလည်း ပြန်ဆပ်မှဘဏ်တွေအနေနဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်လို့ရမယ်။ မြန်မာပြည်က လူတွေက စည်းကမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လိုက်နာမှုအပိုင်းက အားနည်းနေသေးတယ်”ဟု ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါအသိပေးစာများပေးပို့ထားသော်လည်း ဆက်လက်ပျက်ကွက်မှုများပေါ်ပေါက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရခြင်းကြောင့်သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်၍ ငွေပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိနေသည့်ကတ်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ကျန်ရှိသောကြွေးမြီများကို ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက် နောက်ဆုံးထားပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။ ဧရာဝတီဘဏ်မှ အသုံးပြုနေသည့်စနစ်အရ အကြွေးဝယ်ကတ်အတွင်း သတ်မှတ်ငွေပမာဏကြိုတင်ထည့်ထားရန်မလိုဘဲ အကြွေးဝယ်ကတ်အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားသူ၏သုံးလစာဝင်ငွေပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုရမည့်ငွေပမာဏကို Gold? Silver၊ ပလက်တီနမ်ဟူ၍ ကတ်အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲကာ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ငွေကျပ် ၇ သိန်း ပေးသွင်းရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသည့် အလယ်တန်းပြ ဆရာမကြီးဒေါ်?